Sidee u isticmaali ciyaaryahan VLC aad? Inkasta oo laga yaabo in ay aad u isticmaalay si uu u daawado videos , waxaa laga yaabaa inaadan u isticmaaleen sida qalab Qabsashada ah - weli.
Ujeedooyinka shaqada ama si ay u qoraan xusuus shakhsi, waxaad isticmaali qabsaday qalabka on your computer. Waxaad desktop qabashada ama isticmaalka webcam si ay u qoraan videos . Waxaa jira qalab kala duwan oo Qabsashada laakiin ciyaaryahan warbaahinta VLC siinaysaa aad qabsaday shaqeynayaan. Idinkuna ma waxaad u baahan tahay wax plugin kale ama software saddexaad in ay qabsadaan shaashadda.
Isticmaalka media player VLC in ay qabsadaan Desktop
1. Daahfurka VLC Media Player oo taga si warbaahinta. Hadda dooro on Device Ciidamada Open.
2. Hadda waxaad yeelan doontaa in la siiyo gashiga qaar ka mid ah. Beddel hab Ciidamada in Desktop. Waad ka bixi kartaa macluumaad kale sida uu yahay, laakiin haddii aad rabto in aad gacanta ka badan heerka jir, dhigay heerka jeclaystay video ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sii qiyaastii 10.00 f / s.
3. Hadda, u tag Play hoose guji saddexagalka rogay si ay u helaan dhibic ka hoos liiska. Riix badalo.
4. sanduuqa wada hadal socda, ku qor magaca doonayo ee file wax soo saarka, dooran dheeraad ah, oo waa inuu ku shubaa ka dib markii magaca sida name.mp4. Waxaad mar walba tweak kartaa waxyaabo badan oo ag maraya in goobaha sida beddelo sicirka yara iwm Marka aad dooratay, magaca saxda ah iyo goob of video helay inuu ku soo bilowdo badhanka si ay u bilaabaan duubay.
Waxaad yareeyo karo ciyaaryahan VLC halka qoro desktop iyo si ay u joojiyaan qoro kaliya xirto ciyaaryahanka VLC iyo faylka si toos ah badbaadi doonaa halka la doonayo. Habkani waa isku mid daaqadaha iyo kombiyuutarada Mac.
Isticmaalka VLC ciyaaryahan warbaahinta si ay u qoraan aad webcam
Haddii aad rabto in aad qortid video shakhsi adiga oo isticmaaleya isticmaale webcam, markaas VLC siinayaa wanaagsan Qabsashada video shaqeynta on your computer. Waxa ugu fiican oo ku saabsan VLC waa u siin doontaa doorasho badan oo horumarsan sida dejinta muuqa video, size video, tayada video ah oo badan oo kale. Si kastaba ha ahaatee, tayada guud ee video ay ku xidhan tahay qaabeynta hardware ee webcam ah. Waa sidan sidii aad u isticmaali kartaa VLC si ay u qoraan webcam.
1. Daahfurka VLC Media Player on your computer. Hubi in saxaafadda caalamka aan loo socda, maxaa yeelay, dhawaaqa waxaa lagu diiwaangelin doonaa. Laga soo bilaabo Menu Media tagaan si ay u fur Ciidamada Qalabka doorasho.
2. video soo socda, waxaad u baahan doontaa in la qeexo wax badan. Marka hore sii hab qabsaday si ay u muujiyaan si toos ah. Markaasaan la badalo magaca qalab Video inay HD webcam iyo xajisaan Audio magaca qalab default haddii aadan isticmaalaya makarafoon kasta laakiin bedesho makarafoonka ay dhacdo in aad ku isticmaalayso hal. Waxaad mar walba isticmaali kartaa goob ka badan oo ag maraya in fursadaha horumar leh.
3. Haddaba tag inuu ka ciyaaro oo guji fallaadhiina waxay ka rogay in ay helaan soo daadiyaa menu. Dooro diinta ah. Si kastaba ha ahaatee sidoo kale waxaad dooran kartaa il haddii aad isticmaalayso si ay u tuuray.
4. Marka aad ayaa riixi on diinta. Ku qor faahfaahinta sida magaca kordhin file iyo caga file. Dooro dhinacyada kale ee ka soo video goobaha. Marka goobaha yihiin ok, waxaad bilaabi kartaa duubo adigoo gujinaya bilaabatay.
Waad joojin kartaa duubista by ku dhow VLC ah, laakiin haddii aad rabto in aad yara qoro kaliya u isticmaali button hakin ku saabsan VLC. Tallaabooyinkan waxay sidoo kale u shaqeeya oo dhan nidaamka ka hawlgala.
> Resource > VLC > Sida loo Isticmaalo VLC sida Screen ah Qabsashada Tool?